Rita, Writing for My Sake!: One Minute Interview
Posted by Rita at 6/07/2010 03:00:00 PM
ခစ် ပပရရ ပဲ
အလုပ်ချိန်မှာ တကယ်ပဲဗျူးသွားတာလား။း)
တရားစွဲဆိုဖို့ ဆင့်ခေါ်စာကို တရားရုံးက ပို့ပါလိမ့်မယ်
သ လုံးကြီးတင် ပစောက် နှစ်ထပ်ဆင့် သေးသေးတင် သိပ္ပံ
ရှင်မှီး ဆိုရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်
မဆိုးဘူး ကိုယ့်လောက်နီးနီး ပေါရဲလာပြီ
၁ မိနစ် အင်တာဗျူးဆိုတော့ လက်မှာ မော်တာ တပ်ပြီးတော့များ စာရိုက်တာလား။ :D
Art for People sake. Art for art sake. Art for no sake
၁မိနစ် က ဖတ်တော့ တချို့စာကြောင်းတွေက ၂မိနစ် ၃မိနစ်ကျတယ်။
ဟားဟား တိုးတိုးတောက်တောက် ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်နဲ့ စိတ်ထဲရှိတာတွေက တရစပ်သွန်ချနိုင်တာပဲ..။ ပို့စ်ဖတ်မိတုန်းက ကျေးဇူးမတင်မိဘူး။ ကောမန့်တွေ တလှေကြီး ပြန်ချလိုက်မှပဲ ကျေးဇူးတင်ချင်သလိုလို ဖြစ်လာတယ်။
(လျှောချခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငြင်းခုန် အနိုင်လိုခြင်း ထက် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အမြင်ကို ဖလှယ်ရုံသက်သက်ဆိုတာ နားလည်ထားကြပါတယ်။)
ကျောင်းတုန်းက ကဗျာကို စကားပြေ ပြန်ရေးသလို post တစ်ခုလုံးကို comments တွေနဲ့ပြန်ရှင်းထားသလိုဖြစ်နေတာလဲ တစ်မျိုးဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။း)
အစ်မခင်ဦးမေဆီကရောက်လာတာပါ။ကိုညီလင်းဆက် ဘလော့မှာကတည်းကသတိထားမိပေမယ့် တတန်တက
ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ဂျူးစာတွေ တင်ထားတယ်ဆိုလို့။ ဂျူး ကြိုက်တာ၊
ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ သူလိုလူ ကိုမကြိုက်တာ၊
အကြောင်းပြောဖြစ်တော့ သူက အချစ်ဝတ္ထုတွေ မဖတ်ဘူးဆိုဘဲ၊ဂျူး ဝတ္ထုတွေ ကို အချစ်ဝတ္ထုသီးသန့်
နိုင်တော့ဘူး။ဖတ်တတ်ရင် စာရေးသူတွေရဲ့ စေတနာ
ကွန်မန့်ကအစ်မရဲ့ပို့စ် နဲ့ ဘာမှမဆိုင်သလိုဖြစ်သွားရင်
ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ။ပို့စ်ထက် အစ်မရဲ့ ကွန်မန့်ကို
ကိုယ်တိုင်လည်း ပို့စ်ထက် ကိုအင်ဒီနဲ့ ပြောဖြစ်တဲ့ ကွန်မန့်တွေကို ပိုအားရမိပါတယ်။
ပို့စ်ကတော့ cbox မှာ ရင်းနှီးပြီးသားလူတွေ အချင်းချင်း ပြောကြတာမို့ တချို့နေရာတွေမှာ နောက်သလိုတော့ ဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်ဆုံးနားမှာဆို နော်မန် (ခ) ပေါက်စီ နဲ့ အားခွာကို ကျေးဇူးမတင်ပါဘူး ဘာညာပြောထားတာတွေဟာ တကယ်တော့ နောက်ထားတာတွေပါပဲ။
ကွန်မင့်တွေအားလုံးကို ဒီနေ့မှ အပြည့်အစုံ ဖတ်မိလို့ အရမ်းသဘောကျ နှစ်သက်နေမိပါတယ်။ ကျနော့် ဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်အနေနဲ့ တင်လိုကြောင်း အကြောင်းကြားပါတယ်။ သုံးခွင့်ပြုပါ။ (အရင်သုံးလိုက်တော့မယ်။ သဘောမတူရင်တော့ ပြန်ဖြုတ်ပေးပါမယ်။)
တူပါတယ် တူပါတယ် ကိုပေါ
ဟုတ်တယ်... ကိုယ်လည်း ခုမှ ရီတာပြန်ထားတဲ့ comment တွေ ဖတ်ပြီး ပိုသဘောကျသွားတယ်။
ဘာကြောင့်မှန်းတော့ မသိဘူး၊ ရီတာပို့စ်ဆို ပြီးပြီးရော မဟုတ်ဘဲ သေချာဖတ်ချင်တယ်။ အပေါ်ယံသဘောမျိုး ရှပ်မဖတ်ချင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ခုချိန်ထိ တစ်ချို့ စာကြွေးတွေ မရှင်းရသေးတာ။ အေးအေးဆေးဆေး သေချာဖတ်ချင်လို့။
I've just traced from Ko Paw Blog related Ritako's post item........
ကျွန်မ မောင်သစ်ဆင်းစာတွေ ရိုက်တင်တော့ တခြားစာတွေထက် လာဖတ်သူနည်းတာပါပဲ။
How to measure more come or less come on above related item?
That is improper way if you count base on comments.
I want to discuss Mg Thit Sin's articles on your post.
I had read his articles (Nearly all)along time
I've read on your blog (မောင်သစ်ဆင်းစာ) in detail.
But I'm afraid to discuss for that item.
If something going wrong or misunderstand due to my poor English..........
I worry that my comment related (မောင်သစ်ဆင်းစာ) causedafuror to blog reader.
Nobody knows how many reader come in that item.
Some are real readers, never giveacomment.
counter ကနေ ကြည့်ပါတယ်။ comment နဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။
အဓိက ပြောချင်တာက ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်ချင်လို့ လုပ်တယ် ဆိုတာပါ။ ဆရာ မောင်သစ်ဆင်းစာ လူဝင်နည်းတယ်လို့ အဓိက ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဝင်နည်းတယ်ဆိုရင် အဖတ်က ဒီထက်မက နည်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အတွေ့အကြုံအရ သိတာပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဝင်ကြည့်ပြီး စိတ်မဝင်စားရင် ကြည့်ရုံကြည့်ပြီး ပြန်လာခဲ့တာပါပဲ။ ဝင်တိုင်းဖတ်တယ်လို့ ယူလို့ မရတော့... အဝင်နည်းရင် အဖတ်က ဒီ့ထက်မကကို နည်းမှာ ကျိန်းသေပါပဲ။
ဒီကွန်မန့်တွေ ပြတ်တယ် ကောင်းတယ်။
ကိုယ်တိုင် ဘလော့ရေးနေတော့ ဘလော့ရေးတဲ့သူတွေ နေရာကပဲ ပြောထားပါတယ်။ ကျွန်မ ရေးချင်လို့ ရေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်သူ့အတွက်မှ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့် စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်ပဲ ရေးတယ်။ အင်္ကျီတစ်ထည် ဝတ်တာနဲ့ ဘာမှ မထူးဘူး။
ခုမှ သတိထားမိတယ်။ ဘလော့ရေးသူတွေ နေရာက ဆိုတာမှာ ကျန်တဲ့လူတွေကို ဆွဲမထည့်ဘဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ အဓိက ရေးလိုက်သင့်တာ။ ဒါပေမဲ့ ကိုအင်ဒီမေးတာကို ပြန်ရေးတုန်းက ရုံးမှာဖြစ်တာရယ်၊ နဲနဲ လောနေတာရယ်နဲ့ သတိမထားဖြစ်လိုက်ဘူး။ နောက်ပိုင်းလည်း အမှတ်တမဲ့ပါပဲ။ တကယ်တော့ ကိုယ်က အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုပြောလို့ ဘယ်ရပါ့မလဲ။ KNSL မှန်ပါတယ်။
ကိုယ့်အနေနဲ့ကျတော့ ဥပမာ စာဖတ်သူကို အင်ဖော်မေးရှင်း ပေးတဲ့ post ရေးတယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲ ကိုယ်ရေးချင်လို့ ရေးလိုက်တာ လို့ပဲ ခံယူမိတယ်။ အဲဒီလို ရေးတဲ့နေရာမှာ ဘာအတွေးမှ မရှိပါဘူး လို့ ပြောထားတာပါ။ :)
(ရီတာပြောမှ ဘလော့ရေးသူတွေ ဆိုတာ သတိထားမိတယ်။
ကိုယ်က ရီတာဘလော့ဂ်ကိုဖတ်တဲ့တယောက်အနေနှင့် ဘလော့ဂ်ကို ဒီအတွေးနဲ့ဆောက်ထားတယ် ဆိုတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပါ။
ဒါပေမဲ့ ရီတာကလည်း တုတ်ထိုးအိုးပေါက်သမားမို့ ရီတာပြောတာလည်းမှားတယ်လို့တော့ မထင်မိဘူး။
ကိုယ့်အနေနဲ့တော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ ရေးချင်ပါတယ်။
စာရေးသူက စာဖတ်သူကို ပညာပေးဖို့၊ ဗဟုသုတ ဖြန့်ဝေဖို့၊ ထိန်းကွပ်ဖို့၊ ဆုံးမပဲ့ပြင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်အနေနဲ့ မရှိပါဘူး။
အဲဒါတွေကို မဆလခေတ်က အတွေးအခေါ်ဟောင်းတွေလို့လည်းထင်မိတယ်။ အဲဒီခေတ်က အဲဒီအချက်တွေနဲ့ တိုင်းတာခဲ့ကြလို့ "အမှတ်တရ" တို့၊ "နမ်းမှာလားမောင်ရဲ့ မွှေးတယ်ရှင်" တို့ ဆိုတာတွေက ပက်ပက်စက်စက်ကို အဝေဖန်ခံခဲ့ရတာ။ အဲဒီလို (ဝေဖန်တယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း စာရေးသူတွေရဲ့ အလုပ် (စာအုပ်) တွေကိုတင်မကဘဲ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေထိ ပါခဲ့တယ်။)
အဲဒီမှာ ခါတော်မီလုပ်စားတတ်တဲ့ စာရေးဆရာ(ယောက်ျားရင့်မကြီးတွေ) တချို့ စာဖတ်သူကို လမ်းညွှန်မှုပေးရမယ်၊ လမ်းမှားမရောက်အောင် ပညာပေးရမယ်တွေ ဘာတွေ အသံကောင်းဝင်ဟစ်နိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ ဆိုခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာမတွေကို နင်းပြီး စင်ပေါ်တက်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ အမှတ်တရ က ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။ နမ်းမှာလားမောင်ရဲ့ က ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။ အချိန်ကာလတွေ ဖြတ်ပြီး ခုချိန်ထိ ထင်ကျန်ရစ်တုန်းပဲ မဟုတ်လား။
နောက် ဂျူး ကိုယ်တိုင်က ဘာဖြစ်နေပြီး၊ ဘာတွေကို စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လို့၊ ဂျူးကို နင်းတက်ပြီး အသံကောင်းဟစ်နေရာယူခဲ့တဲ့၊ စာဖတ်သူပေါ်ထားတဲ့ စေတနာဆိုတာကို တွင်တွင်ပြောလာတဲ့ စာရေးဆရာတွေ (အဲဒီ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကိုယ် သိပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ထည့်မရေးတော့ဘူး) သူတို့ကိုယ်တိုင် ဘာလုပ်လို့ ဘာဖြစ်နေခဲ့သလဲ။
စာရေးသူတစ်ယောက်က စာဖတ်သူအပေါ် ပဲ့ပြင်ထိန်းကွပ်ရမယ်၊ လမ်းမှန်ပြရမယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆကို နှစ်သက်တဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်မပါဘူး။ ကိုယ် ဘလော့မှာ စာရေးနေလို့ လာဖတ်သူတွေကို မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးဖို့ ကိုယ့်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်တွေ ဘာတွေ ပြောမှ လူပေါင်းများစွာက ကျေနပ်နှစ်သက်ပြီး ဖတ်ကြမယ် ဆိုရင်တောင်မှ ကိုယ်ကတော့ မပြောဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ ကိုယ့်အမြင်အရ အဲဒါ စာဖတ်တဲ့သူအပေါ်မှာ look down ဖြစ်လို့၊ လျှော့တွက်လို့ ပြောနေတာနဲ့ တူလို့ပဲ။ စာရေးသူနဲ့ စာဖတ်သူမှာ စာရေးသူက ပိုမြင့်တယ်၊ ဒါကြောင့် စာဖတ်သူရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ပြုပြင်ရမယ် လို့ ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေနဲ့ သတ်မှတ်မှာလဲ။ စာရေးနေသူမို့ ဖတ်သူကို guide လုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ reader ကို တဆင့်နှိမ့်တွေးလိုက်တဲ့ အတွေးလို့ ယူဆမိလို့ ကိုယ့်အတွက်တော့ ridiculous ပဲ။ ဒါကလဲ လက်ဖမိုး လက်ဖဝါး ကိစ္စတွေပါပဲ။
ဂျူး နဲ့ ဝင်းငြိမ်း အင်တာဗျူးမှာ ပြောသွားတဲ့ ဂျူးရဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ကြိုက်လွန်းလို့ ကိုးကားချင်မိတယ်။
"ရုပ်ရှင် တစ်ခု၊ ၀တ္ထု တစ်ပုဒ်ကြောင့် လမ်းမှားကို လိုက်သွားရလောက်အောင် တုံးတဲ့ မိန်းမမျိုး (ဒီနေရာမှာ ကိုယ်ကတော့ စာဖတ်သူလို့ ပြင်ချင်တယ်) သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။
အခု စာဖတ်ပရိသတ်ဟာ ခပ်ညံ့ညံ့ မဟုတ်ကြဘူး။
စာဖတ်ပရိသတ်ကို ညာလို့ ရမယ် မထင်နဲ့။ သူတို့ အတွေးအခေါ်တွေ ပြတ်သားလာတာ၊ ရဲရင့်လာတာ၊ အကြောင်းအရာ တစ်ခု အပေါ်မှာ နက်ရှိုင်းစွာ ချဉ်းကပ် လေ့လာတတ်လာတာ ... ဒါတွေဟာ ၀တ္ထုတွေကြောင့်ချည်းလဲ မဟုတ်ဘူး။ ရုပ်ရှင် ဂီတတွေကြောင့်ချည်းလဲ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဟာ New Generation ဖြစ်နေလို့ပဲ။
ဒီတော့ မိန်းကလေးတွေ အတုယူ မှားလောက်တာတွေ၊ မမှားလောက်တာတွေနဲ့ ညာမနေပါနဲ့တော့။ ဖုံးကွယ်ထားလို့ မရတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဖုံးကွယ် မထားချင်ပါနဲ့တော့။ အရှိကို အရှိအတိုင်းပဲပေါ့။ လူဆိုတာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို မြတ်နိုးတာပဲ။ တစ်ပါးသူရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို မနှောင့်ယှက်ဘူး ဆိုရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးခေါ်ပါစေလား။ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ပြီး ရဲရင့်စွာ ယုံကြည်တတ်တဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်မျိုးကို ဖန်တီးမိတဲ့အတွက် ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ နောင်တရမှာ မဟုတ်ဘူး။"
အဲဒီလို ခံယူတဲ့အတွက် ဂျူးက စာဖတ်ပရိသတ် အပေါ်မှာ စေတနာမထားသူလား။ ယုံကြည်သိမှတ်သူလား ဆိုတာကို ခွဲခြားနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ :)
ကိုယ်ကတော့ ဂျူးဟာ စေတနာဆိုတဲ့စကားလုံးကို အလွဲသုံးပြီး၊ စင်ပေါ်တက်ခဲ့သူ မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်လေးစားမိတယ်။
အခြေအနေတိုင်း၊ အယူအဆတိုင်း၊ ရပ်တည်မှုတိုင်းအတွက်ကတော့ ထောက်ခံသူနဲ့ မထောက်ခံသူဆိုတာ ရှိမှာပါပဲ။
ကိုယ့် အယူအဆကို ရေးပြပြီးပါပြီ။
"ဘယ်သူ့ကိုမှ ကိုယ့် အာဘော်တွေ အတင်း သွင်းပေးဖို့ စိတ်မဝင်စားဘူး။
ကိုယ့်ကို လာသွင်းပေးလည်း မကြိုက်ဘူး။" ဆိုတာ
ကိုယ် တစိုက်မတ်မတ် လုပ်မယ့် အလုပ်က ကိုယ့်အယူအဆကို ချပြရုံပဲ။ ဒါပါပဲ။
ကိုယ်တိုင် ဘလော့ရေးနေတော့ ဘလော့ရေးတဲ့သူတွေ နေရာကပဲ ပြောထားပါတယ်။ ကျွန်မ ရေးချင်လို့ ရေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်သူ့အတွက်မှ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့် စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်ပဲ ရေးတယ်။ အင်္ကျီတစ်ထည် ဝတ်တာနဲ့ ဘာမှ မထူးဘူး။ KNSL)
အဲဒါရေးတဲ့ အချိန်မှာ အရှင်းလင်းဆုံး အဲဒီလို ရေးမှကို ကိုယ့်ဆိုလိုရင်းက ရောက်မှာပါ။
ဆိုလိုရင်းရောက်အောင် ရေးတာနဲ့ပတ်သတ်လို့ ဥပမာတစ်ခု ပြောမယ်နော်။ ဝင်းဝင်းလတ် ရဲ့ အချစ်၏ နောက်ဆက်တွဲ စာမျက်နှာ ကို ရီဗျူးရေးတော့ "သူ့စာကို ဖတ်ပြီး စာရေးဆရာလုပ်ဖို့ နောက်ဆုတ်သွားစေတာပဲ" ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါတယ်။ အဲဒါက ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ၊ ကိုယ်ပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာကို မြင်သာထင်ရှားအောင် တင်လိုက်တာလဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါဖြင့် ဒါမမှန်ဘူးပေါ့၊ ညာတာပေါ့လို့လည်း ပြောလို့မရပြန်ဘူး။ သူ ရေးပြလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာက ကိုယ့်အတွက်တော့ လန့်သွားစေ (တုန်လှုပ်သွားစေ) လောက်တဲ့အထိ စွဲလမ်းစရာ အရေးအဖွဲ့မျိုးဖြစ်တာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ စာရေးဆရာလုပ်ဖို့ မရွေးချယ်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်မိတာကတော့ တခြား အချက်အလက်တွေလည်း အများကြီးပါခဲ့ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို အကြောင်းအရာကို မူတည်လို့ သုံးလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆိုလိုချင်တာကို သဘောပေါက်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပဲ တွေးတွေး ကိုယ့်အတွက်တော့ ရေးချင်လို့ရေး၊ လုပ်ချင်လို့လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ထဲမှာ စာရေးတာလဲ ပါပါတယ်။ ဘလော့ခေတ်ရောက်လို့၊ လွယ်လွယ်ကူကူလဲ သုံးနိုင်လို့ ဘလော့မှာ စာရေးပေမယ့် ကိုယ် 13 နှစ်လောက်တည်းက ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာမှန်သမျှကို ချရေးကျင့် ရှိလာခဲ့တာပါ။ ဘယ်စာနယ်ဇင်းမှလည်း မပို့၊ လူအများကိုလည်း ထုတ်မပြဘဲ ရေးလာခဲ့တာ။ ဒီလိုနဲ့ ဘလော့ကို အလွယ်သုံးနိုင်တော့ ဘလော့ပေါ်ရောက်လာရော။ မသုံးနိုင်ရင်လည်း ကိုယ့်ဘာသာ စာရွက်ပေါ်မှာ ဆက်ရေးနေမိမှာပါပဲ။ အဲဒီအခါမှာ ဘယ်သူ့အတွက်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
စိတ်ဝင်စားတာ၊ ဖတ်ခဲ့ဖူးတာ၊ ပြောပြချင်တာ၊ ဝမ်းသာတာ၊ ဝမ်းနည်းတာ၊ ဒေါသထွက်တာ အားလုံးက ကိုယ့်ဘာသာ ရေးချင်လို့ကို ရေးခဲ့တာတွေပါပဲ။ လိုချင်တဲ့သူက လိုချင်တဲ့ အပိုင်းကို ဖြတ်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးဆိုတာကလည်း သူ့အကြိုက်နဲ့ကိုက်ရင်၊ အကျိုးရှိရင် ကျေးဇူးတင်တယ် ဆိုတာ ဖြစ်လာနိုင်တာပါပဲ။ အကြိုက်နဲ့ မကိုက်ဘဲ ကျော်သွားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုရင်တော့ ညာနေတာ သေချာပြီ။
ဥပမာပေါ့။ ကျော်နှင်းဆီ ဂျပန်စာ/စကားအကြောင်းရေးတယ် ဆိုပါတော့။ အဲဒီအခါ ကိုယ့်အနေနဲ့ ညာပြောမှသာ ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ပြောဖြစ်တော့မယ်။
ဒါပေမဲ့ ဥပဒေကြောင်း ရေးလို့ သိရတဲ့ အခါကျ ကိုယ့်အတွက် သုံးဖို့မလိုသည့်တိုင်အောင် သိလိုက်ရတာကိုပဲ ကျေနပ်လို့ ကျေးဇူးတင်နေမှာပေါ့။ မရွှေမိ သာ "သူလိုလူ" ကို ရိုက်တင်နေရင် ကိုယ် ကျော်ဖတ်သွားမှာပါပဲ။ အဲဒီ ပို့စ်တွေအတွက် ကြိုက်တဲ့သူက ကျေနပ်စွာ နှစ်သက်စွာ ဖတ်နေပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီကျေးဇူးလိုပဲ။ ရေးသူက ဘယ်လိုရေးရေး ကိုယ့်စိတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက်ရေးသလို ခံစားရမှာပါပဲ။ ကိုယ်ပြောချင်တာတွေနဲ့ ကိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်စား ဝင်ပြောပေးနေသလိုတောင်မှ ခံစားရသေးတယ်။ ဥပမာ - တေဇာ ရေးတဲ့ တောမီး။
နောက် ဂျူး နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးလည်း ပြောချင်သေးတယ်။ နောက်ပိုင်းစာတွေကို အရင်ကစာတွေလို မစွဲလမ်းတော့ပေမယ့် ဂျူး ရဲ့ လမ်းကြောင်းကို လေးစားရင်း ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်ရေးချင်လို့ကို ရေးနေတဲ့စာတွေ ဖတ်ပြီးချိန်မှာ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ကြိုက်ချင်တဲ့ အပိုင်း၊ နှစ်သက်ချင်တဲ့ အပိုင်းကို ရွေးလို့ သူ့သဘောနဲ့ သူ နှစ်သက်နေမှာပါပဲ။ ဘာရေးရေးကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာ၊ ဘလော့ဂါ ကိုယ့်မှာ မရှိသလို၊ ကိုယ် ရေးသမျှကိုလည်း မချွင်းမချန် ကြိုက်မယ့်သူ ရှိလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါဘူး။
သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ကိုယ့်အာဘော်နဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ချပြရုံသာ ပြမှာဖြစ်ပြီး၊ ဘယ်တော့မှ သွတ်သွင်းဖို့ မကြိုးစားဘူး ဆိုတာပါပဲ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီလို သဘောထားရှိတဲ့ စာရေးသူမျိုးကသာလျှင် စာဖတ်ပရိသတ်ကို ကိုယ်နဲ့ တတန်းတည်းထားပြီး၊ ယုံကြည်သိမှတ်သူ၊ အမှန်တကယ် လေးစားသူလို့ ကိုယ်က ယူဆလို့ပါ။
ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းဆို၊ တိုက်တွန်း၊ လွှမ်းမိုးမှုမှ မပါဘဲ ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်ချင်လို့ကို ရွေးချယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်အတွက် "ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်ချင်လို့ လုပ်တဲ့ အလုပ်၊ ကိုယ့်စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက် လုပ်တဲ့ အလုပ်" ဆိုတာကလွဲပြီး တခြားပြောစရာ ကိုယ့်မှာ မရှိပါဘူး။
(ဝေဖန်ရေးဆရာဆိုတဲ့သူတွေ ကော်ဖီနဲ့မြည်းဖို့ရေးထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့